नेपाली क्रिकेटर अन्जली चन्दले राखिन् विश्व रेकर्ड - VON TV
नेपाली क्रिकेटर अन्जली चन्दले राखिन् विश्व रेकर्ड
१६ मंसिर २०७६, सोमबार १२:२१ 31 ??? ???????
नेपालकी अन्जली चन्दले क्रिकेटमा विश्वकिर्तिमान कायम गरेकी छिन् ।
पोखरा रंगशालामा भएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को महिला क्रिकेट अन्तर्गत माल्दिभ्स विरुद्धकाे खेलमा उनले कुनैपनि रन नदिई ६ विकेट लिएकी हुन् । विश्व क्रिकेटमा अहिलेसम्म कुनैपनि क्रिकेटरले रन नखर्चिकन ६ विकेट लिएन सकेका थिएनन् ।
सातौँ ओभरमा बलिङ गर्न आएकी अन्जलीले मेडन राख्दै तीन विकेट हात पारिन्। लगत्तै नवाौं ओभरमा उनले कुनैपनि रन खर्च नगरि थप २ विकेट हात पारिन्। एघारौं ओभरमा उनले थप एक विकेट लिइन्। साथै ह्याट्रिक समेत पूरा गरिन् । ६ विकेट लिने क्रममा उनले ह्याट्रिक समेत पुरा गरिन् ।
टस जितेर पहिले ब्याट्रिङ गरेको माल्दिभ्सले १०.१ ओभरमा १६ रन बनाएको थियो । जवाफ ब्याटिङ गरेको नेपालले ०.५ ओभरमै लक्ष्य भेट्टायो। नेपालका लागि करुणा श्रेष्ठले १३ रन बनाइन्। नेपाललाई थप चार रन भने एक्ट्रा प्राप्त भएको थियो। दक्षिण नेपालले आगामी डिसेम्बर ४ मा बंगलादेश र डिसेम्बर ६ मा श्रीलंकासँग खेल्नेछ ।
शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा रवि लामिछाने निर्दोष : अदालत
लिस्बनमा दक्षिण एशियाली आप्रवासीहरुबिच ग्याङ्ग फाइट : ४ जनालाई छुरा प्रहार, एकलाई लाग्यो गोली !
अमेरिकी दूतावास भन्छ – ‘एमसीसीमा सैन्य मामिला छैन’
राजधानी लिस्बनमा मात्रै २००० भन्दा बढी घरविहीन, ३६१ जनाको सडकमै बास !
ओली-दाहाल, बोलचाल बन्द !
अदालतको पक्राउ आदेशपछि दुर्गा प्रसाईँ फरार, प्रहरी खोज्दै !